कोरोना भाइरस : रुघाखोकी लगाएत यस्ता लक्षण देखिए सर्तक रहनुहोस् , कसरी बच्ने ? - Himali Patrika
कोरोना भाइरस : रुघाखोकी लगाएत यस्ता लक्षण देखिए सर्तक रहनुहोस् , कसरी बच्ने ?
हिमाली पत्रिका १० माघ २०७६, 1:50 pm
उत्तरी छिमेकी चीनमा ‘कोरोना भाइरस’को त्रासदी फैलाएको बेला चिनबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरुलाई पनि यसको संक्रमण देखिएको छ। यो भाइरसको संक्रमणमा परेका एक नेपालीलाई उपचार पछि डिस्चार्ज गरिएको छ । तर अरु थप ३ जनालाई पनि यो भाइरसको संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ ।
उनीहरुबारे केही जानकारी खुलाइएको छैन । एक जना बिरामीलाई भने ग्राण्डी हस्पिटलबाट टेकु अस्पतालमा रेफर गरिएको छ । उनको उपचारका लागि छुट्टै ३ जना विशेषज्ञ डाक्टरको टोली खटिएको छ । कोरोना भाइरसको आशंका गरिएका विरामीलाई अस्पतालमा छुट्टै कक्षमा राखेर उपचार थालिएको टेकु अस्पतालले जनाएको छ ।
जाडोको मौसम छ । यतिबेला रुघाखोकी लाग्नु सामान्य मानिन्छ । जबकी कोरोना भाइरसले संक्रमण गरिसकेपछिको सुरुवाती लक्षण पनि यस्तै हुन्छ । त्यसैले यसबाट कतिपय झुक्किन सक्छन् । रुघाखोकी जस्तै लागेपनि यो सामान्य रुपमा रहँदैन । त्यसपछि क्रमस उच्च ज्वरो आउँछ, टाउको दुख्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यसबाट मृ त्यु समेत हुन्छ ।